ကိုကာကိုလာသုံးစွဲသူများသည်လူမှုဆက်ဆံရေးနည်းပါးခြင်း - သင်၏ Brain On Porn
porn, တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းနှင့် Mojo: တစ်ဦးကအာရုံကြောသိပ္ပံအမြင် (2012)
ကိုကင်းသည်အသုံးပြုသူများလျော့နည်းလူမှုရေး interaction ကပျော်မွေ့
image: ကင်းအသုံးပြုသူများ medial orbitofrontal cortex အတွက်အနိမ့်လှုပ်ရှားမှုပြသ
ပုံမှန်ကင်းအသုံးပြုသူများသည်အခြားသူများအတွက်ခံစားမှုစာနာမှုအတွက်အခက်အခဲများရှိသည်နှင့်သူတို့လျော့နည်း prosocial အပြုအမူပြ။ ဇူးရစ်တက္ကသိုလ်၏စိတ်ရောဂါကုဆေးရုံတစ်ဦးကလေ့လာမှုယခုလူမှုရေးအဆက်အသွယ်ထိုသူတို့အဘို့လျော့နည်းကြိုးကြောင့်ကင်းအသုံးပြုသူများသည်လူမှုရေးလိုငွေပြမှုရှိသည်အကြံပြုထားသည်။ လူမှုရေးကျွမ်းကျင်မှုထို့ကြောင့်ကင်းစွဲ၏ကုသမှုကာလအတွင်းလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးသင့်သည်။
ဥရောပ၌ရှိသကဲ့သို့ကောင်းစွာအဖြစ်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း, ကိုကင်းဒုတိယဖြစ်ပါသည်အများဆုံးမကြာခဏဆေးခြောက်ပြီးနောက်မူးယစ်ဆေးဝါးကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ နာတာရှည်ကင်းအသုံးပြုသူများကိုပိုမိုဆိုးရွားမှတ်ဉာဏ်စွမ်းဆောင်ရည်, အာရုံစူးစိုက်မှုအခက်အခဲများနှင့် Attention Deficit ဖော်ပြရန်ဒါပေမယ့်လည်းမိမိတို့၏ လူမှုရေးကျွမ်းကျင်မှု အကြံပြုဇူးရစ်တက္ကသိုလ်၏စိတ်ရောဂါကုဆေးရုံယခင်လေ့လာမှုများအဖြစ်ထိခိုက်နေကြသည်။ ဤရွေ့ကားစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလည်းကင်းသုံးစွဲသူများတခြားသူတွေရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှုထောင့်ကိုယူလျော့နည်းစိတ်ခံစားမှုစာနာမှုကိုပြသပါက ပို. ခက်ခဲအသံကနေစိတ်ခံစားမှုအသိအမှတ်ပြုရန်ကိုရှာဖွေ, လူမှုရေး interaction ကတစ်လျော့နည်း prosocial ထုံးစံ၌ပြုမူရန်အခက်အခဲများရှိသည်ထင်ရှား, သူတို့သည်နည်းပါးလာလူမှုရေးအဆက်အသွယ်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ထို့အပွငျပိုဆိုးစိတ်ခံစားမှုစာနာသေးငယ်တဲ့လူမှုကွန်ယက်ဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့သည်။ အဆိုပါသိပ္ပံပညာရှင်များယခုလူမှုရေးသိမြင်လိုငွေပြမှု၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးအထောက်အကူပြုယူဆ ကိုကင်းစွဲ.
အဆိုပါထုတ်ဝေသူတို့၏လက်ရှိစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများတွင် သိပ္ပံအမျိုးသားအကယ်ဒမီ၏တရားစွဲဆိုမှုသည်စိတ်ပညာရှင်ထရီ Preller und Boris Quednow, ဇူးရစ်တက္ကသိုလ်၏စိတ်ရောဂါကုဆေးရုံစမ်းသပ်နှင့် ClinicalPharmacopsychology ၏ဌာနခွဲဌာနမှူး, ထိုချို့ယွင်းကောက်ချက်ချ လူမှုရေးဆိုင်ရာအပြန်အလှန်အကျိုးပြုခြင်း ကိုကင်းသုံးစွဲသူကျွမ်းကျင်မှုလူမှုရေးဆုလာဘ်တစ်ခုတုံးတုံ့ပြန်မှုများကရှင်းပြနိုင်ဘူး။
သုတေသနအဖွဲ့ကကိုကင်းသုံးစွဲသူများသည်ရူပဗေဒအရထိတွေ့ဆက်ဆံမှုပြီးနောက်လူနှစ်ယောက်၏အာရုံစူးစိုက်မှုကိုအာရုံစိုက်ခြင်း - မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်မတူသောကျန်းမာရေးထိန်းချုပ်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုနည်းသည်ဟုမှတ်ယူကြသည်။ နောက်ဆက်တွဲအလုပ်လုပ်သောပုံရိပ်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုတွင်ကိုကင်းသုံးစွဲသူများသည်ဤအခြေခံကျသောလူမှုရေးအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်စဉ်တွင် medial orbitofrontal cortex ဟုခေါ်သောဆုလာဘ်စနစ်၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခု၏အားနည်းချက်ကိုပြသခြင်းကိုပြသခဲ့သည်။ စိတ် ၀ င်စားစရာမှာလူမှုရေးအကြည့်အဆက်အသွယ်အတွင်း medial orbitofrontal cortex အားအားနည်းစေခြင်းသည်လွန်ခဲ့သောသီတင်းပတ်များအတွင်းလူမှုဆက်သွယ်မှုနည်းပါးခြင်းနှင့်လည်းဆက်စပ်နေသည်။ Quednow ကဤသို့ရှင်းပြသည် -“ ကိုကာကိုလာသုံးစွဲသူများသည်လူမှုရေးဖလှယ်မှုကိုဤလှုံ့ဆော်သူကိုမသုံးသောသူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်လူမှုရေးဖလှယ်မှုကိုအပြုသဘောဆောင်ခြင်းနှင့်အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုနည်းပါးသည်ဟုယူမှတ်သည်။
Preller နှင့် Quednow အားဖြင့်အဆိုပြုထားသည့်အတိုင်းဦးနှောက် function ကိုထိုသို့သောအပြောင်းအလဲများအဘယ်ကြောင့်မှီခိုရှင်းပြဖို့ကူညီစေခြင်းငှါ, ကိုကင်းအသုံးပြုသူများသည် မိသားစုပြproblemsနာများ၊ သူငယ်ချင်းများဆုံးရှုံးခြင်းသို့မဟုတ်အလုပ်အကိုင်စသည့်ပြင်းထန်သောလူမှုရေးအကျိုးဆက်များဖြစ်ပေါ်လာသော်လည်းမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်းကိုရပ်တန့်ရန်ပျက်ကွက်လေ့ရှိသည်။ လူမှုဆက်သွယ်မှုများအတွင်းဆုလာဘ်လျှော့ချမှုသည်ကိုကင်းမှီဝဲသူတစ် ဦး ချင်းတို့သည်သူတို့၏မူးယစ်ဆေးဝါးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုစဉ်အတွင်းထောက်ခံအားပေးသည့်လူမှုရေးအဆက်အသွယ်များကိုအဘယ်ကြောင့်ဆုံးရှုံးစေရကြောင်းကိုလည်းရှင်းပြနိုင်သည်။ လူမှုဆုလာဘ်သည်အောင်မြင်သောစိတ်ပညာကုထုံးအတွက်အရေးပါသည်ကိုထည့်သွင်းစဉ်း စား၍၊ Preller နှင့် Quednow တို့ကအကြံပြုသည်မှာ - လူမှုရေးစွမ်းရည်၊ စာနာခြင်း၊ prosocial အပြုအမူ၏ကုသမှုစဉ်အတွင်းလေ့ကျင့်သင်ကြားထားရမည် ကိုကင်းမှီခို ကုသမှု၏ထိရောက်မှုနှင့်ရေရှည်တည်တံ့ရေးကိုမြှင့်တင်ရန် "။
နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များ: ထရီအိပ်ချ် Preller, Marcus Herdener, Leonhard Schilbach, ဖိလစ်Stämpfli, Lea အမ် Hulka, ဿိ Vonmoos, Nina Ingold, Kai Vogeley, Philippe N. Tobler, Erich Seifritz နှင့် Boris ခ Quednow ။ အကျိုးကိုစနစ်၏ functional ပြောင်းလဲမှုများကိုကင်းသည်အသုံးပြုသူများအတွက်လူမှုရေးကြည့်ဖို့ကျိုးသကဲ့သို့ဖြစ်ကြပါစေတုံ့ပြန်မှုအခြေခံ။ PNAS ။ ဇန်နဝါရီလ 20, 2014 ။ Doi: 10.1073 / pnas.1317090111
“ကျွန်မတို့ ၁၄ နှစ်အရွယ် ကလေးတွေက အိပ်ရာကနိုးတာနဲ့ စောင့်ကြည့်ရမယ်လို့ ပြောတယ်။ ဉာဏ်အမြော်အမြင်ရှိနေတယ်လို့ ဖော်ပြကြတယ်... t.co/GtFVYGk0eY